I-Biography kaLouise McKinney
Ummeli wobubele, uLouise McKinney wayengomnye wabasetyhini bokuqala abakhethiweyo kwiNdibano Yomthetho wase-Alberta kunye nomnye wabafazi ababini bokuqala abakhethwa kwindlu yowiso-mthetho eCanada naseBrithani yaseBrithani. Umqhubi obalaseleyo, wasebenza kwimithetho yokunceda abantu abakhubazekileyo, abafuduki, nabahlolokazi nabafazi abahlukeneyo. ULouise McKinney naye wayengomnye we "Famous Five" oomama base-Alberta abalwa kwaye banqoba imfazwe yezopolitiko kunye nezomthetho kwiNkundla yabantu ukuba babe nabasetyhini abaqaphela njengabantu phantsi koMthetho we- BNA .
NgoSeptemba 22, 1868, eFrankville, e-Ontario
NgoJulayi 10, 1931, eClaresholm, kwiNorthwest Territories (ngoku i-Alberta)
Ikholeji yootitshala kwi-Ottawa, e-Ontario
Utitshala, ukuzimisela kunye nomlindi wamalungelo omama kunye ne-Alberta MLA
Izizathu zikaLouise McKinney
ukulawula utywala obunamandla
Amalungelo epropati yamalungelo kunye noMthetho woTywala
Umsebenzi kaLouise McKinney
ULouise McKinney wayengutitshala e-Ontario waza waseNorth Dakota.
Wathuthela kwikhaya elikufuphi kufuphi neClaresholm, kwiNorthwest Territories ngo-1903.
ULouise McKinney waba nxaxheba kwi-Union of Christian Temperance Union (WCTU) ngoxa e-North Dakota kwaye wahlela isahluko eClaresholm. Waqhubeka njengomququzeleli we-WCTU iminyaka engaphezu kwe-20, ekugqibeleni waba ngumongameli osebenzayo wenhlangano kazwelonke.
ULouise McKinney wakhethwa kwi-Assembly ye-Alberta ye-Legislative Assembly ngo-1917, okhetho lokuqala apho abesifazane baseKhanada bebenokugijima kwiofisi okanye bavote. Ukuxhaswa ngeminikelo yezopolitiko eyenziwa ngamashishini amakhulu okuphuza kunye notywala kumaqela amakhulu, uLouise McKinney wagxila phantsi kwebhanki yeLungu elingabambisani, igranti.
Ngosizo lukaHenryetta Muir Edwards , uLouise McKinney wazisa lo mthetho-mthetho owaba nguMthetho woMbane, owaqinisekisa umfazi wesithathu kwindlu yezindlu xa umyeni wakhe efa.
ULouise McKinney wahlulwa ngowe-1921 lwase-Alberta ukhetho kwaye akazange aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde.
ULouise McKinney wayengomnye wabasetyhini abane ukuba basayine iSiseko seManyano eyenza iSonto leManyeneyo laseCanada ngo-1925.
ULouise McKinney wayengomnye we "Famous Five" e-Alberta abaseTyhini kuBantu abaBamkelekileyo abaye baqinisa isimo sabafazi njengabantu phantsi koMthetho we-BNA ngo-1929.
Imiyalelo eLawulayo: Ukusebenzisa iMood Imperative in Spanish
Indlela yokubhala i-Essay kwiiNtshukumo ezi-5
Ulwabizo lweMetric in Linguistics
Amagama ombala kwiLatini
Ubugcisa kunye neNzululwazi ye-Wrestling i-Steer ukuya kwiNdawo yesiBini
IBhayibhile YeBhayibhile Ngokuphathelele Ubungqingili
Amadolophu ase-US Awabona iKrisimesi eNtshonalanga yonke iminyaka